Amerika: Jery todika 2008 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2019 4:08 GMT
Nodarohan'ny tafika mitam-piadiana Kolombiana ny tobin'ny mpiady anaty akatan'ny Tafika Revolisionera Mitam-piadiana ao Kolombia (FARC) miorina ao anatin'ny sisintanin'i Ekoadaoro, niteraka olana ara-diplomatika teo amin'ireo firenena roa tonta izany. Miaraka amin'ny filoha Venezoeliana Hugo Chávez nandray anjara tamin'ny adin-teny, izay tsy ela dia nivadika ho krizy ara-tsisintany tanteraka. Nanangana pejy fandrakofana manokana haingana ny ekipan'ny Global Voices Amerikana Latina izay nanasongadina hevitra sy eritreritra avy amin'ireo bilaogera avy amin'ny firenena telo.
Ohatra iray fotsiny avy amin'ireo mpanoratra an-tsitrapo izay manampy amin'ny tontolon'ny bilaogy ao amin'ny firenen'izy ireo tsirairay izany mba hanasongadinana feo avy any Amerika Latina ary hanome topi-maso izay lazain'ny bilaogera momba ny zava-mitranga sy ny vaovao avy any amin'ny faritra.
Betsaka ny hetsika natao tany Kolombia tamin'ny taona 2008, anisan'izany ny fanavotana ireo takalon'aina notazonin'ny FARC. Olona ambony lasibatry ny fakàna an-keriny ilay mpilatsaka hofidiana filoham-pirenena teo aloha Ingrid Betancourt, izay nankalazaina manerana izao tontolo izao ny famotsorana azy. Noho ireo tetikady mampihorohoro ireo, dia notsipahan'ny diabe maro mpandray anjara ampahibemaso tao amin'ny tanàna maro manerana an'i Kolombia ny FARC.
Saripikan'i Mariacecita ary nampiasaina tamin'ny lisansa Creative Commons
Fomba iray ho an'ny vahoaka ankapobeny mba hanehoana ny tsy fankasitrahany ny politikan'ny governemanta na ny tsy fihetsehan'ireo mpitarika voafidy ny diabe. Tahaka izany no nitranga tany Meksika, Meksikana an'alina no nidina an-dalambe mba hanohitra ny tsy fahafahan'ny governemanta hifehy ny heloka bevava, izay matetika mifandraika amin'ny fanondranana zava-mahadomelina nomanina ka miteraka fahafatesana feno habibiana manerana ny firenena ary ahiahiana ho anisan'ny nahafatesan'ny iray tamin'ireo tompon'andraikitra ambony miady amin'ny heloka bevava ao amin'ny firenena.
Tao Arzantina, nisy ny hetsi-panoherana, diabe sy sakan-dalana namparefo ny firenena raha nikasa hitsipaka ny saram-panondranana ara-pambolena vaovao natolotry ny governemanta ireo mpanondrana. Na izany aza, tsy nandany ny fepetra ny Senà tamin'ny farany.
Natao ireo fihetsiketsehana hafa mba tsy hanoherana, fa mba hanehoana firaisankina sy fanohanana ny governemanta. Tambanivohitra sy hetsika ara-sosialy Boliviana no nandeha tany La Paz, antenimieram-pirenena mba hangataka amin'ny Kongresy hanao fitsapakevi-bahoaka hifidianana drafi-dalàm-panorenana. Nampiseho fanohanana ny filoha Boliviana Evo Morales ihany koa ny diabe.
Samy nahazo fanohanana sy fanoherana samihafa ireo filoham-pirenena manerana an'i Amerika Latina. Voafidy tamin'ny taona 2008 ny filoha vaovao, Eveka katolika Romana teo aloha, Fernando Lugo avy ao Paragoay, nandritra ny onjan'ny fiovana ary nandrodana ny fahefan'ny Antoko Colorado nandritra ny 61 taona.
Nampiseho ny fanohanan'ny vahoaka na ny fandavana ny tari-dàlana tian'ny filoha hitondrana ny firenena ihany koa ny fifidianana sy ny fitsapankevi-bahoaka nasionaly. Tany Ekoadaoro, nahazo tombony ny filoha Rafael Correa rehefa lany tamin'ny isam-bato betsaka ny fitsapakevi-bahoaka ho amin'ny lalàmpanorenena vaovao ao amin'ny firenena.
Nivoaka vaovao ireo filoham-panjakana hafa ary nanome ny heviny ireo bilaogera, tahaka ny fanapahan-kevitry ny filohan'i Kosta Rikà, Oscar Arias izay nangataka tamin'ilay olo-malaza ara-panahy Dalai Lama mba hanemotra ny fitsidihany ny firenena, ka nahatonga ny maro hanontany tena raha fanapahan-kevitra hampitony an'i Shina izany.
Filoham-pirenena maro no sahirana tanteraka noho ireo loza voajanahary nateraky ny Reny Voajanahary. Voa mafy indrindra i Ekoadaoro tamin'ny fipoahan'ny volokano Tungurahua sy ny tondra-drano mahery vaika, izay nitarika ny fanambarana ny firenena ho latsaka an-katerena. Niharan'ny oram-baratra ihany koa i Goatemala ka nahatonga ireo faritra ambanivohitra sy mahantra indrindra ao amin'ny firenena ho marefo tanteraka. Niteraka fahafatesana maherin'ny 80 ny fihotsahan'ny tany sy ny tondra-drano tany amin'ny faritra atsimon'i Brezila, Santa Catarina ary anisan'ny loza voajanahary ara-tontolo iainana ratsy indrindra teo amin'ny firenena tamin'ny taona 2008.
Saripikan'i Nelson Piedra ary nahazoana alalana.
Na dia nitranga tamin'ny taona 2007 aza ny horohorontany nandrava ny tanànan'i Pisco sy Ica, nanadihady ny fandrosoana na ny tsy fahampian'ny fandrosoana amin'ny ezaka fanarenana herintaona taty aoriana ny bilaogera.
Ireo no sasany amin'ireo olana goavana indrindra nitranga manerana ny faritra, ary navoakan'ny ekipa Amerikana Latina ao amin'ny Global Voices. Ny lahatsoratra manaraka dia hanasongadina ny sasany amin'ireo tantara tsara sy mahaliana indrindra navoaka tao amin'ny Global Voices nandritra ny herintaona.